Ehe, Kuchine Hukuru Mabloggi Kunze Iko Kuwana ... Heino Maitiro Ekuvatsvaga Kwavo | Martech Zone
Hongu, Kuchine Hukuru Mabloggi Kunze Kunze Kuti Uwane… Heino Maitiro Ekuzvitsvaga
NeChishanu, Gumiguru 5, 2018 Douglas Karr
Blogs? Ndiri kunyora chaizvo nezve blogging? Hungu, hongu. Ipo izwi remburera repamutemo ratiri kushandisa iye zvino muindasitiri iri content marketing, Kubloga kunoenderera kuve ndiyo yakajairika fomati iyo makambani ari kushandisa kuti vasvike pamaonero avo uye ikozvino vatengi. Handina kumbobvira ndaziva kuti izwi Blogging yaizokura kuita obselecense, asi inoshandiswa zvakanyanya zvishoma pane nakare kose. Muchokwadi, ini ndinowanzo taura kunyorera kwangu pano sezvinyorwa kwete Blog namagwatidziro.
Sezvo ini ndiri kuvandudza vatengi vangu masaiti, ini dzimwe nguva handitombo sanganisira iyo izwi bhurogu mune rondedzero yeunganidzwa wavo wezvinyorwa. Saka, riini blog isiri blog? Handina chokwadi… asi maitiro ekunyora zvakateedzana zvemukati izvo zviri mukuburitsa zvakateerana kurongeka kuri kwese kwese kwaunotarisa online. Iwo mapuratifomu ayo mabhizinesi ari kushandisa achiri ehunyanzvi mablog, uye anosanganisira mafidha ekubatanidza. Zviri kungoita kuti verbiage uye mukurumbira zvine chekuita neku blogga chete hazvishandiswe zvekare.
Kufungisisa kunogara kuri 20/20, asi ndinoshuva kuti dai ndaiziva kuti temu yacho yaizopererwa nenguva nekukurumidza pandakanyora Corporate Kubhuroka kweDummies. Kunyangwe makore masere gare gare, mazhinji emazano uye matipi andakashandisa mubhuku achiri kubudirira mazuvano. Mamwe emapuratifomu aenda uye injini dzekutsvaga dzakanyanyisa kuwanda, asi hapana mubvunzo kuti blogging inoramba ichiburitsa mibairo mikuru kumasangano.
Panzvimbo pekushandisa vaverengi vekudya, vanhu vanoshandisa uye vanogovana zvinyorwa kuburikidza nesocial media. Zvichida ndosaka Google Blog Kutsvaga aive pamudyandigere… zvinyorwa zvemablog hazvichakwanise kusiyaniswa kubva kune chero zvimwe zvirimo online.
Ehezve, Google ikozvino yaita nhau… Nharembozha yekushandisa uye injini inogona kushandiswa kutsvaga masosi enhau, mazhinji acho ari mablog. Kana iwe uchida kuti yako blog iwedzerwe, iwe unogona kusaina semuparidzi paGoogle News. Nhau dzeGoogle dzine dzimwe nzira dzakasarudzika dzekuzvibvunza. Imwe nzira ndeyekutsvaga chaizvo RSS yakabuda. Saka, kana iwe ukatsvaga (semuenzaniso) uye wedzera kuburitsa = rss, unogona kuwana zvinobuda kubva kune zvakabatana zvemukati manejimendi manejimendi.
Heino RSS Kutsvaga uchishandisa Google Nhau:
Kune dzimwe nzira dzakati wandei dzekuti uchiri kuwana mablog akanaka pamhepo, sezvakatsanangurwa mune ino Blogger Networking Nongedzo, Tsvaga New Blogs. Ivo vano tsanangudza dzinoverengeka nzira, kusanganisira:
kushandisa Google Search mibvunzo yekuwana yakamisikidzwa rondedzero yemablog.
Kutsvaga mablogiki uchishandisa a Feed Reader.
Ehe, kushandisa Social Media senge Facebook, Twitter, uye kunyange Pinterest.
Uchishandisa zviripo Directories online, mazhinji acho achiri kushanda zvakanyanya uye akarurama.
Kuwana Blogrolls pamablog aripo. Aya ndiwo marondedzero ebhukumaki mablogiki ayo blogger inokurudzira.
Tsvaga chaunofarira munyori, ivo kazhinji vane mablog.
Ive neshuwa yekutarisa izere chinyorwa, chishandiso chikuru.
Tags: nyayamunyoriBlogblog searchBloggingblogrollContent MarketingDirectoriesdhairetorifeed readergoogle newsgoogle searchkutsikisaevanhu vezvenhaukunyora
Mifananidzo Yakakosha Sei Kune Yako Dhijitari zvemukati?
Maitiro Ekurekodha Akawanda Mahotera Etienzi pane Yako Zoom H6 Ine Yekure Guest muGarageband